Wu Assassins စီးရီးများက Katheryn Winnick နှင့် Lewis Tan တို့ကိုထပ်ပြောသည် - Netflix မူရင်း
Netflix Wu Assassins စီးရီးများသည် Vikings 'Katheryn Winnick and the Badlands သို့' ထည့်ထားသည့် Lewis Tan ဖြစ်သည်
Photo Credit: A&E Networks Press မှရရှိသော Jonathan Hession Image မှဗိုက်ကင်း / သမိုင်းလမ်းကြောင်း
netflix streaming ရာဇပလ္လင်၏ဂိမ်း
Netflix သည် Buffy the Vampire Slayer reboot ကိုကောက်ယူသင့်သည် San Diego ရုပ်ပြောင် (ဓာတ်ပုံ) တွင် Stranger Things မှ cosplay ပြသခဲ့သည်။
Katheryn Winnick နှင့် Lewis Tan တို့သည် Netflix ၏ Wu Assassins သို့ဆက်သွယ်သည့်ကြယ်များထဲတွင်ပါဝင်သည်။ ဒီကသူတို့လက်ရှိပေါ်နေတဲ့ပြပွဲများအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
Netflix ရဲ့ ဝူ Assassins ယင်း၏သရုပ်သရုပ်ဆောင်များ၏ကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ ဗိုက်ကင်း ‘ကက်သရင်း Winnick နှင့် Badlands သို့ Tan Lewis Tan သည် Tommy Flanagan နှင့်ပူးပေါင်းနေသည်။ မင်းမဲ့စရိုက်၏သား ) နှင့် Tzi Ma ( တရားအားထုတ်ရန်ပန်းခြံ Iko Uwais နှင့် Byron Mann တို့၏ရှေ့တွင်သရုပ်ဆောင်ရန်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀ ခုအတွက်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး Netflix မူရင်းမှာထားသည့်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသိရသည် ပြီးစီးရမည့်နောက်ဆုံးအချိန် ။
Winnick နှင့် Tan တို့သည်လျှို့ဝှက်ရဲအရာရှိ Christine C.G. Gavin နှင့်ကားခိုးယူသူခေါင်းဆောင် Lu Xin Lee တို့အသီးသီးရှိသည်။ Flanagan နှင့် Ma တို့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုအကြီးအကဲ Alec McCullough နှင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိ Chinatown ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင် Mr. Young တို့ကိုအသီးသီးကစားမည်ဖြစ်သည်။
သဘာဝလွန်ဒြပ်စင်များပါသောကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုစီးရီးအဖြစ်ကြေငြာခံခဲ့ရပြီး၊ များစွာသောလူတို့အတွက်ကြီးမားသောမေးခွန်းမှာကြယ်နှစ်ပွင့်နှင့်သူတို့၏ပြပွဲများအတွက်ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်။ အခု Winnick နဲ့ Tan နှစ်ခုစလုံးမှာပြပွဲတွေပြေးနေတုန်းပဲ။ သူတို့ထဲကတစ်ခု ဗိုက်ကင်း ရုံမှာခဲ့သည် SDCC 2018 panel ကိုအပေါ် Winnick အတူ။
နောက်ထပ်: Netflix တွင်အကောင်းဆုံး Post-Apocalyptic ပြပွဲ
အနည်းဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ အစ ဝူ Assassins ရိုက်ကူးရေးစတင်မထားပါဘူး ၎င်းသည် ၁၀ ဇာတ်လမ်းတွဲစီးရီးလည်းဖြစ်မည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ပျမ်းမျှ primetime ပြပွဲထက်ရိုက်ကူးသည့်ကာလသည်တိုတောင်းလိမ့်မည်။ ရာသီတစ်ခုလုံး Netflix ကိုတစ်ခေါက်သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အတွက်ဖြစ်စဉ်များအားလုံးကိုအတူတကွရိုက်ကူးမည်။
အထူးသဖြင့် Winnick သို့ရောက်သောအခါလူတို့သည်အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ကြသည်ကိုနားလည်နိုင်သည် ဗိုက်ကင်း ။ Winnick ရဲ့ဇာတ်ကောင် Lagertha စီးရီးတစ်ခုလုံးရှင်သန်လိမ့်မည်ဟုအဘယ်သူမျှမအာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အဓိကအာရုံမကြာသေးမီက Ragnar ၏သားများနှင့်ဖန်တီးသူနှင့်တစ် ဦး တည်းသော - စာရေးဆရာမိုက်ကယ် Hirst သူလိုအပ်တဲ့အခါအဓိကဇာတ်ကောင်ကိုချွတ်သတ်ပစ်ရန်ဆန္ဒရှိရဲ့သက်သေပြခဲ့သည်။
သတင်းကောင်းအများကြီး ဗိုက်ကင်း ရာသီ6ရိုက်ကူးမှုပြပွဲရဲ့ပဉ္စမရာသီသေးပြီးဆုံးမရရှိနေသော်လည်းယခုပြည့်စုံသည်။ ဤသည်အသစ်သောစီမံကိန်းကွာပြင်းထန်သောသမိုင်းပြပွဲကနေ Winnick ရဲ့အာရုံစိုက်ယူဖွယ်မရှိ။ သမိုင်းကိုမမှာရသေးပါ ဗိုက်ကင်း ယင်း၏ဆဌမရာသီအတိတ်, ဒါကြောင့်သူမ၏ဇာတ်ကောင်ရှင်သန်ပါဘူးရင်တောင် Winnick နောက်ထပ်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမအာမခံချက်ရှိပါတယ်။
သူတို့ hulu ၏တောင်ဘက်ပန်းခြံကိုယူခဲ့ပါဘူး
အလားတူယုတ္တိဗေဒသက်ဆိုင်သည် Badlands သို့ ။ AMC သည်စတုတ္ထရာသီသို့ပြန်လာမည်၊ တတိယရာသီ၏ဒုတိယတစ်ဝက်ကိုထုတ်လွှင့်ရန်ရှိ၊ အတွက်ရိုက်ကူးခြင်း ဝူ Assassins အဖြစ်စီးရီးအပေါ် Tan ရဲ့အခန်းကဏ္ of ၏လမ်းရဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ် Badlands သို့ ရိုက်ကူးရာသီအတွက်ပြုမိသည်။
သငျသညျ Netflix ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည် ဝူ Assassins ? အခြားပြပွဲများ၏ကြယ်များသည်စီမံကိန်းအသစ်များနှင့်တွဲဖက်သောအခါသင်စိတ်ပူပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေပါ။
ဖတ်ရမည်Netflix တွင်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင် ၃၀
netflix မေလ 2017 တွင်အကောင်းဆုံးအရာ
Mike Myster Eddie Murphy ကင်မရာ diaz ဂျွန် Lithgow
သေနတ်သမားရာသီ3Premiere နေ့စွဲ